Fanohanana ara-tsaina - Ny biby fiompy dia iray amin'ireo fanampiana tsara indrindra | Bezzia
Izy ireo no mahery setra lehibe amin'ny fianatsika fa koa ny fahasalamantsika. SATRIA ny biby fiompy dia lasa iray amin'ireo fanampiana ara-tsaina lehibe noho ny antony maro samihafa. Mety kokoa raha fantatrao izy ireo, satria raha mbola tsy manana biby manodidina anao ianao, dia tonga ny fotoana.
Ny fananganana biby dia ho iray amin'ireo zavatra tsara indrindra hataonao amin'ny fiainanao. Tsy ho an'ny fanomezana trano sy firaiketam-po tsy misy fepetra ihany fa satria hamerina anao amin'ny fomba maro hafa izy io. Fotoana izao hahitana ny antony mahatonga azy ireo ho tonga fanampiana ara-psikolojika izay lazainay betsaka.
1 Ny antony manosika handao ny trano
2 Manome orinasa lehibe antsika ny biby
3 Fanohanana ara-tsaina: Mampiroborobo ny fahatokisan-tena ry zareo
4 Manampy antsika hanana andraikitra izy ireo
5 Mialà amin'ny adin-tsaina
6 Mahatsiaro ho voaro kokoa isika
Ny antony manosika handao ny trano
Rehefa sendra soritr'aretina ratsy isika, noho ny antony maro hafa, dia mandany vola bebe kokoa isika handao ny trano. Ny firenena misy ny tebiteby na ny famoizam-po aza dia afaka miseho amin'ny fiainantsika tsy misy fampandrenesana. Noho izany, marina fa misy andiana fitsaboana raha mbola mametraka ny tenantsika eo am-pelatanan'ny manam-pahaizana manokana isika. Fa etsy ankilany, ny biby fiompy dia ho iray amin'ireo fanampiana ara-tsaina lehibe. Satria manana andraikitra amin'izy ireo ianao dia mila mivoaka ny trano izy ireo, mandray ny diany ary manala ny tenany. Izany dia mamporisika anao hanaparitaka tena na dia tsy dia misy fandresena firy aza.
Manome orinasa lehibe antsika ny biby
Ny iray amin'ireo fihetseham-po tsy tokony tsapan'ny olona dia ny fanirery. Satria io no mahatonga ny olona hirodana ara-tsaina, entin'ny toe-po, izay mety ho mpamono olona mahafaty. Noho izany, ho eo ny biby fiompy hanampy rehefa tena ilaina izy ireo. Ambonin'izany rehetra izany, rehefa very olona isika ary mila fanohanana, tsy misy toa an'ireo biby manana fitiavana tsy misy fepetra., izay ho hitantsika eo imasony sy ny fihetsik'izy ireo, mba hahafahan'izy ireo manandratra ny fanahintsika tsikelikely, mampiakatra antsika amin'ny fantsakana izay tsapantsika indraindray.
Fanohanana ara-tsaina: Mampiroborobo ny fahatokisan-tena ry zareo
Fa maninona no tena ilaina ny fiheveran-tena? Satria mankafy ny fananana toe-tsaina tsara kokoa ary mazava ho azy, ny fiadanam-po ankapobeny. Zava-dehibe iray isan'andro, fa koa, mba hahatratrarana izay rehetra atolotray. Fa indraindray tsy dia mora loatra ny mitazona azy miaraka amintsika. Ankehitriny dia hanampy toy ny tsy nisy toy izany ny biby fiompy, satria ho hitantsika ny asa vita ary hahatsapa ho tsara isika amin'ny fikarakarana ny biby. Izay mitarika antsika hanome lanja bebe kokoa ny tenantsika.
Manampy antsika hanana andraikitra izy ireo
Tsy fantatsika velively izay tena mahasoa antsika raha tsy efa eo imasontsika izany. Noho izany, ny andraikitra afaka manana biby dia tsy maintsy raisina, satria tena hanampy antsika isan'andro izany. Ho tsapanao hatrany fa tafiditra amina asa toy izany ianao, miaraka amin'ny finamanana sy ny fitiavana tsy misy fetrany. Ho afaka hanana sitraka isika ary izany dia hampitombo ny andraikitra bebe kokoa. Inona no anton'izany rehetra izany? Mahatsiaro ho tsara kokoa ary hahatratra izany amin'ny minitra voalohany. Satria noho ny biby fiompy dia hahita fahatsapana vaovao izay tsy fantatsika akory isika.
Mialà amin'ny adin-tsaina
Ny iray amin'ireo olana lehibe mety ho hitantsika amin'ny fiainana ankehitriny dia ny fihenjanana. Izany dia omena amin'ny gadona fiainana iainantsika, fa ny tsy fahafahantsika manatona ny zava-drehetra dia mahatsiaro ho sempotra isika. Fa ny fananana biby fiompy eo anilantsika dia hampiavaka antsika amin'izany. Ka ny orinasanao irery no hamela antsika hivoaka amin'ity karazana aretina ity ary hanao izany a fanamaivanana na fanarenana amin'ny olona ketraka.
Mahatsiaro ho voaro kokoa isika
Azontsika atao ny milaza fa ity ampahany ity dia toy ny famintinana ny teo aloha rehetra, na ny maro an'isa. Satria miaraka amin'izy ireo isika dia mahatsapa fa miaraka, ankoatra ny fialan-tsasatra satria manala ny fihenjanana, dia toy izany koa dia hahatonga antsika hahatsapa ho azo antoka kokoa amin'ny fotoana rehetra. Manana ny orinasa tonga lafatra isika ary izany dia mahatonga antsika hieritreritra fa tsy hisy zava-dratsy hitranga amintsika. Noho izany, ny zava-drehetra dia mahasoa indrindra amin'ny fiainantsika, eny, fa amin'ny fahasalamana ara-pientanam-po koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Psychology » Pets ho iray amin'ireo fanampiana ara-tsaina lehibe